Amazinga okushisa aphezulu nobudlelwano bawo nezinga lokufa | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Amazinga okushisa aphezulu awavamile ukuhambisana nanoma yini enhle. Zingadala imicimbi yesimo sezulu esibi kakhuluSikhuphuka kanjani isiphepho ngenxa yethempelesha yamanzi, ukoma okukhulu, ukubhebhethekisa imililo, njll. Kodwa-ke, futhi kukhona ubudlelwano phakathi kwamazinga aphezulu okushisa namazinga okufa kwabantu.
Kuwo wonke umuntu kukhona ubungozi. Imisebenzi noma imisebenzi engenziwa ngaphandle nayo iyingozi kakhulu. Lizisola kanjani leli cala yile ndoda eneminyaka engu-54 eyashona emasontweni amabili edlule ngenxa yelanga lokushisa ngenkathi yenza imisebenzi ye-asphalt eMorón de la Frontera. Kepha kuneqembu labantu okuthi, noma ngabe benza msebenzi muni, bathinteke kakhulu emiphumeleni yokushisa okuphezulu.
Ubani futhi uthinta kanjani?
Ezingeni lomzimbaSithola asebekhulile, abantu abanezimo zenhliziyo, zokuphefumula noma zesifo sikashukela. Kuye kwafakazelwa ukuthi akukhona ukutholakala kokushisa okuphezulu kuphela okubangela, kodwa futhi nobude besikhathi obuqhubekayo, amazinga okushisa aphakeme isikhathi eside. Ngosuku olunamazinga okushisa aphezulu, iphesenti lokufa liyakhuphuka 4% kuqhathaniswa nesilinganiso esilinganisiwe. Izinsuku ezi-2 ezinamazinga okushisa aphezulu, ukufa kukhuphukela ku-10% ngosuku olulandelayo, naku-22% ngosuku lwesithathu. Ezinganeni ezingaphansi konyaka owodwa inyuka iye kuma-1%, futhi iphindwe kabili uma nayo inezimo zokuphefumula, zokugaya ukudla noma zenhliziyo.
Ezingeni lezengqondo futhi kubanga umonakalo, ngoba kwatholakala ubudlelwano phakathi kwamazinga okuzibulala namaza okushisa.
Uma sibheka emuva kumarekhodi, sithola ukushisa okukhulu okwahlasela iYurophu ngo-2003. Kwaba nokufa okwengeziwe okungama-35.000 kunalindelekile.
Khumbula ukubaluleka kokuhlala kude nokushisa lapho ukushisa kushaya. Ziqinise futhi uvikele ukuvivinya umzimba ngezikhathi eziphakeme. Ikakhulukazi phakathi kwabasengozini kakhulu, kepha konke kukonke. Imiphumela yayo emzimbeni wethu iyingozi ngokulinganayo ekushiseni.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Amagagasi okushisa » Amazinga okushisa aphezulu nobudlelwano bawo nezinga lokufa
Ukwanda kokuqashwa kwezimoto kungcolisa umoya eziQhingini zaseBalearic